Mpisolovava Miantso ny Kaomisiôna Afrikàna, ny Manampahaizana avy Amin’ny Firenena Mikambana Mba Hirotsaka an-tSehatra Amin’ny Raharahan’ireo Bilaogeran’ny Zone 9 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2019 7:10 GMT
Fikambanana fito iraisampirenena mpiaro ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny zon'olombelona, tarihan'ny Media Legal Defence Initiative, no nanao antso tamin'ireo manampahaizana ao amin'ny Kaomisiôna Afrikàna sy ny Firenena Mikambana mba handinika ny fisamborana tsy an-drariny sy fitànana am-ponja ireo Etiopiàna sivy bilaogera, mpanao gazety ary mpiaro zon'olombelona.
Befekadu Hailu, Atnaf Berahane, Natnael Feleke, Mahlet Fantahun, Zelalem Kibret, sy Abel Wabela dia mpikambana ao anatin'ny vondrona iray fantatra amin'ny hoe “Zone9”, bilaogy iray tsy miankina izay mamaritra ny tenany ho toy ny “vondrona iray tsy voarakitra ara-dalàna ahitàna ireo tanora etiopiàna bilaogera mivondrona miasa mba hanorina fomba fitantaràna tsy miankina ny zavamisy sosialy sy politika ao Etiopia.” Sehatra iray malaza fanaovana media sôsialy ny ” Zone9 “, izay nipongatra ho toy ny iray amin'ireo habaka mpitaridàlana amin'ny fanaovana fanentanana momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny zo araka ny lalàmpanorenana. Tao amin'ny biraony sy teny an'arabe ireo enina ireo no nosamborina tamin'ny 25 Aprily, taorian'ny ny nisavàn'ny polisy ny tranon-dry zareo sy nangiazany ny solosainy manokana ary ireo zava-boasoratra. Ilay mpanao gazety miasa tena, Tesfalem Waldyes, sy Edom Kassaye dia samy voasambotra tamin'ny andro iray mitovy ary ilay mpanao gazety, Asmamaw Hailegeorgis avy amin'ny gazety Addis Guday dia nosamborina ny ampitson'izay, 26 Aprily.
Sary fanentanana ho famotsorana ireo bilaogeran'ny Zone 9. Noforonin'i Hugh D'Andrade, nafangaraon'i Hisham Almiraat.
Samy nentina nankany amin'ilay fonja malaza Maekelawi avokoa ireo olona sivy bilaogera , mpanao gazety ary mpiaro zon'olombelona, toerana nitazonana azy ireo tamin'ny fomba niafina. Nomena alàlana hahazo manatitra sakafo ny fianakaviana, saingy tsy navela hahazo tohana araka ny lalàna ireo mpikatroka (tsy hahazo mpisolovava).
Hatramin'ny nisian'ilay fisamborana faobe taorian'ny fifidianana tamin'ny 2005, ireo fisamborana ireo no anisan'ny famoretana midadasika indrindra ireo feo mpanohitra ao Etiopia. Tao anaty fanambaràna an-gazety iray natao ny 2 May 2014, naneho ny ahiahiny ny kaomisera ambony avy amin'ny Firenena Mikambana ho an'ny Navi Pillay:
“Tsy azo ampiasaina ho entina mandrahona sy manampina ny vavan'ny mpanao gazety, bilaogera, mpikatroka mpiaro zon'olombelona ary mpikambana anaty fikambanana fiarahamonina sivily ny resaka ady atao amin'ny asa fampihorohoroana. Ary tsy afaka heverina ho heloka bevava ny fiarahana miasa amin'ireo fikambanana avy any ivelany mpiaro ny zon'olombelona. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, lasa tena nihatery dia tery ny habaka iasàn'ireo feo manohitra ao Etiopia….Ao anatin'ny ezaka ataony hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana, ary amin'ny fotoana rehetra ary manoloana ny lalàna iraisampirenena, tsy maintsy manaja ny andraikiny momba ny resaka zon'olombelona ny governemanta Etiopiàna.”
Hatreto, tsy mbola misy vesatra fosialy anenjehana ireo bilaogera sy mpanao gazety, saingy ny ankamaroan'ny mpanao gazety sy mpiaro zon'olombelona voafonja ao Etiopia tato anatin'ny taona vitsy lasa, isan'ireny ry Eskinder Nega, Reeyot Alemu sy Woubshet Taye dia samy nohelohina araka ilay lalàna tamin'ny 2009 entina hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana, drafitra iray midadasika be nampiasaina hitsimponana sy hampidirana am-ponja an'ireo mpiaro zon'olombelona sy feo marobe mpanohitra ao anatin'ny firenena.
Ny Media Legal Defence Initiative, East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project, CIVICUS, Global Voices, PEN American Center, Committee to Protect Journalists and Electronic Frontier Foundation dia niaraka nandefa Antso maika iray ho an'ny iraka manokan'ny Kaomisiôna Afrikàna sy ny Filankevitry ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona, nitakiana ny firotsahan-dry zareo an-tsehatra mba hiantohana ny famotsorana avy hatrany ireo olona sivy mpiaro ny zon'olombelona ireo. Ao anatin'ilay taratasin-dry zareo, milaza ireo fikambanana fa ny fisamborana sy fanibohana an'ireo bilaogera sy mpanao gazetin'ny Zone9 noho ny fampiharan-dry zareo am-pilaminana ny zony ho afaka maneho hevitra an-kalalahana dia fanitsakitsahana ny andraikitr'i Etiopia, na izany manoloana ny Fifanarahana Afrikàna momba ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka, na manoloana ny Fifanarahana Iraisampirenena momba ny Zo Sivily sy Politika. Singanina manokana, ny fandàvana ny fahazoan'ireo sivy voafonja ireo tsy hahazo mpisolovava dia fanitsakitsahana an-kitsirano ny zon'izy ireo hahazo fitsaràna tsy mitanila.
Nangatahan'ireo fikambanana ny mpampakatenin'ny Firenena Mikambana sy ny Firaisambe Afrikàna mba hanampy hiantoka ny famotsorana tsy misy hatak'andro ireo mpikatroka, ary hanambàra fa fanitsakitsahana mibaribary ny zo maha-olona azy ireo ny fisamborana sy fanohizana ny fitazonana azy. Manana safidy maro hiatrehana io fanitsakitsahana ny zo maha-olona io ireo manampahaizana manokana avy amin'ny Firaisambe Afrikàna sy ny Firenena Mikambana. Ny Kaomisiôna Afrikàna, izay manao ny fivoriany faha-55 ao Luanda, Angolà, amin”izao fotoana izao (May 2014) dia afaka mandany fanapahankevitra iray momba io olana io, hanamelohana ireo fisamborana sy hangatahana amin'i Etiopia ny hamotsorana avy hatrany ireo mpiaro zon'olombelona. Na ireo mpampakatenin'ny Firaisambe Afrikàna na ny an'ny Firenena Mikambana dia samy afaka manao fangatahana hitsidika an'i Etiopia hanao fanadihadiana. Amin'ny maha-mpikambana azy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana momba ny Zon'Olombelona, mety ho voatery i Etiopia hanaiky izay fangatahana izay, mifanaraka amin'ireo andraikitra eo an-tsorony voalaza amin'ilay Fehinkevitry ny Fivoriambe 60/251, izay milaza hoe ireo mpikambana ao anatin'ny Filankevitra dia tokony “hanaja ireo fenitra avo amin'ny resaka fampiroboroboana sy fiarovana ny zon'olombelona” ary “hiaraka hiasa feno amin'ny Filankevitra.” Ilay Antso Maika dia mitaky ireo iraka manokana mba hitazona an'i Etiopia mifanaraka amin'ireo adidy hentitra ireo.
Vakio ato ilay Antso Maika (PDF): 20140503 AU UN Urgent Appeal 9 Ethiopian journalists